Professional Brow Palette 020 | CATRICE COSMETICS
Professional Brow Palette 020
Professional Brow Palette
မျက်ခုံးမွှေး တချောင်းချင်းစီ ဆွဲနိုင်ပါတယ်
မတူညီတဲ့ textureတစ်ခုစီကို မျက်ခုံး တနေရာချင်းစီ အသေးစိတ်ဆွဲဖို့ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်
အရောင်ခြောက်ရောင် ၊ ဟိုက်လိုက်တာ ၂ရောင်နှင့် ဖယောင်းတစ်ကွက် ပါဝင်ပါတယ်
Professional Brow Palette ၂ခပျြက မတူညီတဲ့ ကွိုကျနှဈသကျရာ ပုံတှကေို ဖနျတီးလို့ ရပါတယျ။ အရောငျရှေးခွယျစရာမြားတာကွောငျ့ရော textureအမြားကွီး ပါဝငျတာကွောငျ့ရော ဘယျသူ့မကျြနှာမှာမဆို စိတျကွိုကျဖနျတီးလို့ရမှာပါ။ တဈခပျြခငျြးစီမှာ ကွာရှညျခံစတေဲ့ ပေါငျဒါ ၆ရောငျ၊ ဟိုကျလိုကျ ၂ရောငျနဲ့ ၊ fixingဖယောငျးတဈကှကျစီ ပါဝငျပါတယျ။
Professional Brow Palette ၂ချပ်က မတူညီတဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပုံတွေကို ဖန်တီးလို့ ရပါတယ်။ အရောင်ရွေးခြယ်စရာများတာကြောင့်ရော textureအများကြီး ပါဝင်တာကြောင့်ရော ဘယ်သူ့မျက်နှာမှာမဆို စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးလို့ရမှာပါ။ တစ်ချပ်ချင်းစီမှာ ကြာရှည်ခံစေတဲ့ ပေါင်ဒါ ၆ရောင်၊ ဟိုက်လိုက် ၂ရောင်နဲ့ ၊ fixingဖယောင်းတစ်ကွက်စီ ပါဝင်ပါတယ်။
MICA, TALC, NYLON-12, DIMETHICONE, MAGNESIUM STEARATE, OCTYLDODECANOL, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, TOCOPHERYL ACETATE, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, CETYL DIMETHICONE, OCTYLDODECYL STEAROYL STEARATE, CAPRYLYL GLYCOL, PHENOXYETHANOL, CI 77491 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE).
MICA, TALC, NYLON-12, DIMETHICONE, MAGNESIUM STEARATE, OCTYLDODECANOL, SIMMONDSIA CHINENSIS (JOJOBA) SEED OIL, TOCOPHERYL ACETATE, COCOS NUCIFERA (COCONUT) OIL, ALOE BARBADENSIS LEAF EXTRACT, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, CETYL DIMETHICONE, OCTYLDODECYL STEAROYL STEARATE, CAPRYLYL GLYCOL, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, ALUMINA, PHENOXYETHANOL, CI 77007 (ULTRAMARINES), CI 77491, CI 77492 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE).
TALC, MICA, PHENYL TRIMETHICONE, LAUROYL LYSINE, TOCOPHERYL ACETATE, CAPRYLYL GLYCOL, PHENOXYETHANOL, MAY CONTAIN/ [+/-]: CI 42090 (BLUE 1 LAKE), CI 77491, CI 77492, CI 77499 (IRON OXIDES).
TALC, MICA, PHENYL TRIMETHICONE, LAUROYL LYSINE, TOCOPHERYL ACETATE, CAPRYLYL GLYCOL, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, ALUMINA, PHENOXYETHANOL, MAY CONTAIN/ [+/-]: CI 77491, CI 77492, CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE).
POLYBUTENE, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, HYDROXYSTEARIC ACID, TALC, CERA MICROCRISTALLINA (MICROCRYSTALLINE WAX), CERA ALBA (BEESWAX), TOCOPHERYL ACETATE."